I-Order of Operations ingilungiselele kanjani uHlelo | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 22, 2007 NgoMgqibelo, Okthoba 17, 2015 Douglas Karr
I-Algebra ibilokhu iyisihloko engisithandayo. Akukho mbono omningi ohilelekile, ibhokisi lamathuluzi nje lezindlela nokuhleleka kokusebenza okuzoxazululwa. Uma ubuyela esikoleni esiphakeme, uzokhumbula (kucashunwe ku Math.com):
Okokuqala yenza yonke imisebenzi elele ngaphakathi kwabakaki.
Okulandelayo, yenza noma yimuphi umsebenzi ngama-exponents noma ama-radicals.
Ukusebenza kusuka kwesobunxele uye kwesokudla, yenza konke ukubuyabuyelela nokuhlukanisa.
Ekugcineni, usebenza kusuka kwesobunxele uye kwesokudla, yenza konke ukufaka nokususa.
Nasi isibonelo kusuka Math.com:
Ukufaka lokhu entuthukweni kulula kakhulu.
Ukusebenza ngaphakathi kwabakaki kufana nokuhlelwa kwekhasi lami, ngefomethi elula ye-HTML. Ngiqala ngekhasi elingenalutho futhi ngiligcwalise ngokuzinzile lize libe nazo zonke izinto engizifunayo. Ukuqinisekisa ukwakheka kwesixhumi esibonakalayo somsebenzisi, ngihlala ngisebenza neXHTML ne CSS. Noma ikuphi lapho kunezinkulumo (isb. I-database noma imiphumela yohlelo), ngiphawula ikhodi bese ngithayipha umbhalo we-dummy, izithombe, noma izinto.
Okulandelayo, ngisebenza nanoma yiziphi izichasisi noma ama-radicals. Le yimisebenzi yami yohlelo noma yedatha ekhipha, iguqule futhi ilayishe (i-ETL) idatha njengoba ngifisa ukuyikhombisa ekhasini lami eligcwalisiwe. Ngisebenza ezinyathelweni ezikuleyo oda ngaphandle kokuthi ukufometha kwimiphumela yombuzo uqobo ekusebenzeni okuthuthukile.
Okulandelayo ukuphindaphinda noma ukwahlukanisa. Yilapho ngenza lula ikhodi yami. Esikhundleni sombhalo owodwa omkhulu we-monolithic, mina abstract ikhodi engingakwazi ukuyifaka ifaka phakathi amafayela nezigaba. Ngokuthuthuka kwewebhu, ngijwayele ukusebenza kusuka phezulu kuye phansi, kunjalo.
Ekugcineni, ukusebenza kusuka kwesobunxele kuye kwesokudla, konke ukufaka nokususa. Lesi sinyathelo inqubo yokugcina, ukusebenzisa ama-tidbits wokugcina wokuqinisekiswa kwefomu, izinto zesitayela, ukuphatha amaphutha, njll. Futhi, ngijwayele ukusebenza kusuka phezulu kuye phansi.
Ukuthuthuka okuhle akuyona inkinga eyedlula inkinga enkulu ye-Algebra. Unezinto eziguqukayo, izibalo, imisebenzi… nokuhleleka okunengqondo kokusebenza ukuthola imiphumela emihle kakhulu. Ngibona abaduni abaningi abamane 'bakusebenze' kepha uthola (njengoba nginakho) ukuthi uma ungahleleli indlela yakho futhi uthathe indlela enengqondo, uzithola usubhala ikhodi yakho kaninginingi lapho izinkinga noma izinguquko ziyadingeka.
I-Algebra ibilokhu ifana nephazili kimi. Bekulokhu kuyinselele, kumnandi, futhi bengazi ukuthi impendulo elula kungenzeka. Zonke izingcezu zikhona, udinga nje ukuzithola bese uzihlanganisa kahle. Ukubhala ikhodi akuhlukile, kepha kujabulisa kakhulu ngoba umphumela wakho we-puzzle ungathanda ube yikho!
Angiyena umqambi osemthethweni, futhi angiyena omkhulu. Ngine; kodwa-ke, ngithole ukuncoma kwekhodi engiyibhalile kumaphrojekthi amaningi. Ngikholwa ukuthi iningi laso kungenxa yokuthi ngenza ukuhlela okuningi kakhulu, ukugcizelela amabhodi amhlophe, ukukhipha i-schema, njll. Ngaphambi kokuthi ngibhale leyo tag yokuqala.
Tags: Izibaloukuhleleka kokusebenzaizinhlelo
Okthoba 23, 2007 ngo-12: 33 AM
Lokhu bekungukuthunyelwe okuhle okuhle. Ngangingakaze ngicabange ukufaka ukuhleleka kokusebenza kokuthile okungaqondakali njengokuthuthuka, kepha uma ucabanga ngakho, uyabona ukuthi zombili azifane ngendlela efanayo. Kuzofanele ngiyibeke uphawu lokubekisa le bese ngiyisebenzisa njengesethenjwa. ;]
Okthoba 23, 2007 ngo-5: 36 AM
Ngiyabonga uStephen! Ngisebenza kuphrojekthi enkulu emsebenzini njengamanje evula amatafula amaningi namakhasi amaningi ngokulandelana okunengqondo (konke kuxhunywe yikhasi elilodwa lisebenzisa i-Ajax) futhi ngabona ukuthi nganginakekela kangakanani futhi nganquma ukubhala ngakho.